Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in ay la wareegtay 4 markab oo sidda shidaal laga leeyahay… – Hagaag.com
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in ay la wareegtay 4 markab oo sidda shidaal laga leeyahay…
The impounded Iranian crude oil tanker, Grace 1, is silhouetted as it sits anchored off the coast of Gibraltar on Saturday, July 20, 2019. Tensions have flared in the Strait of Hormuz in recent weeks as Iran resists U.S. sanctions that are crippling its oil exports and lashes out after the seizure on July 4 of one of its ships near Gibraltar.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay la wareegtay 4 markab oo sidda Shidaal laga leeyahay Iran islamarkana ku sii jeeday dalka Venezuela.
Waaa shixnaddii ugu ballaarnayd oo shidaal ah oo ay Mareykanka gacanta ku dhigaan.
Ku dhawaad 1.1 milyan oo fuusto oo shidaal ah ayaa gacanta lagu dhigay iyada oo gacan laga helayo “wadamo saaxibo la ah Mareykanka “, sida ay sheegtay wasaaardda caddaaladda Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Maraakiibtan ay jabiyeen cunaqabataynta Mareykanka ay Iran ku soo rogeen.
Safiirka Iran u fadhiya dalka Venezuela ayaa sheegay in aysan jirin maraakiib shidaal sidda oo ay Iran leedahay oo gacanta lagu dhigay.
Garsoore ku sugan Mareykanka ayaa soo saaray warqadda lagu soo qabtay shixnadan shidaal ee saarneyd afarta Markab ka dib markii ay dowladda Mareykanka kiis u gudbisay maxkamada bishii aanu soo dhaafnay.
Bayaan ay soo saartay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay “in ay ku guuleysteen gacan ku dhigidda “shidaal malaayiin doolar ah oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka Iiraan”.
Ciidamada ilaalada kacaanka Iraan ayaa ah laan ka tirsan ciidamada Iran kuwaasi oo ay Mareykanka u aqoonsan yihiin in ay yihiin urur argagixiso.
“Hantida la qabtay ayaa waxay imika gacanta ug jirtaa Mareykanka ,” ayaa lagu yiri bayaanka iyada oo aan wax faahfaahin ah laga bixin goobta Maraakiibta lagu qabtay.
Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii gacanta lagu dhigayay Maraakibtaasi ay ciidamada badda Iiraan ay ku guuldareysteen isku deygoodii ahaa in ay Maraakiibtaasi soo koraan.
Sargaal sare oo dowlada Mareykanka ka tirsan ayaa wakaalada wararka ee AP u sheegay in markii Maraakiibtaasi sidday shidaalka la qabanayay aan la isticmaalin wax awood Militari ah, taa badalkeedana shirkadaha Maraakiibtani iska lahaa loogu hanjabay cunaqabatayn si loogu qasbo in shidaalka ay Mareykanka ku soo wareejiyaan.
Ma cadda ilaa iyo imika goobta ay ku sugan yihiin Maraakiibtan kala ah Bella, Bering, Pandi iyo Luna .
Danjiraha Iran u fadhiya Venezuela Hojat Soltani ayaa wararka sheegaya in la qabtay Maraakiib sidda shidal Iiraan laga leeyayahay ku tilmaamay “dacaayad been abuur ah “.
Xiisadda u dhaxeysa Mareykanak iyo Iiraan ayaa aad u sareysay tan iyo markii maamulka madaxwayne Donold Trump uu ka baxay heshiiskii Niyukleeka ee u dhaxeeyay Iiraan iyo dalalka reer galbeedka.